Akpa Aka Dịka e si kọpụta ụdị mkpụrụ akwụkwọ typewriters gosipụtara mgbanwe site n'ụdị visual visual siri oke ike na ụdị jetikal dị ọcha, Qwerty-elementrị bụ ike nke ike, akara, na mfe. Akụkụ ígwè ndị rụrụ arụ nke ndị omenkà dịgasị iche bụ ihe ngosipụta pụrụ iche nke ngwaahịa a, nke na-enye akpa ahụ ka ọ bụrụ ihe atụ. Mkpa ahụ dị akpa bụ igodo mkpụrụ akwụkwọ abụọ nke na-emepụta onwe ya ma ọ bụ onye mmebe ahụ bịakọtara ọnụ.
Tọọzdee 4 Novemba 2021
Nchịkọta Womenswear Nchịkọta ahụ, Macaroni Club, sitere n’aka The macaroni & # 039; s site n’etiti narị afọ nke 18 jikọtara ha na ndị riri ahụ taa. Macaroni bụ oge ụmụ nwoke gafere ókè ejiji n'oge London. Ha bụ ndị ngosi akara nke narị afọ nke 18. Nchịkọta a gosipụtara ike nke akara site n'oge gara aga ruo ugbu a, ma mepụta Club Macaroni dị ka akara site n'onwe ya. A na-esi n'ike mmụọ nsọ emepụta nkọwa si na ejiji ndị ahịa na 1770, na ụdị ejiji ugbu a na oke oke na ogologo.
Oge Eji Eme Ihe
Oge Eji Eme Ihe Argo sitere na Gravithin bu ihe omuma nke nke ndi sextant dere. Onwere ihe akuko nke edeputara okpukpo abua, di na ndo abuo, nke di omimi na oji oji, iji kwanyere ugwu akuko nke Argo ahu. Obi ya na-eti aka na Switzerland Ronda 705 quartz phase, ebe iko sapphire na brads 316L siri ike na-eme ka ọ dịkwuo mma. Ọ dịkwa 5ATM na-egbochi mmiri. A na-enweta elekere ahụ n'ụdị agba atọ dị iche iche (ọla edo, ọla ọcha, na oji), ụzọ ọkpụkpọ abụọ (Oke Ọcha na Oké Osimiri Ojii) na ụdị eriri isii, na ihe abụọ dị iche iche.
Tiuzdee 2 Novemba 2021
Nchịkọta Womenswear Nhazi nke ngwakọ ngwakọ bụ iji cuteness dịka usoro lanarị. Ntọala mara mma a tọrọ ntọala bụ rịbọn, ruffles, na okooko osisi, a na-edozi ha site na iji igwe na-arụ ọrụ ọdịnala. Nke a na-eweghachị usoro ozuzu ochie maka ngwakọ ọgbara ọhụrụ, nke bụ ihunanya, ọchịchịrị, mana ọ ga-adịru mgbe ebighi ebi. Usoro usoro ịchekwa nke ngwakọ mara mma na-akwalite nkwado iji mepụta atụmatụ ndị na-adịghị agafe agafe.
Mọnde 1 Novemba 2021
Mgbanaka Mimaya Dale, onye mere okike nke Ohgi zigharịrịrị ozi ihe atụ na mgbanaka a. Nkpali ya banyere mgbanaka a putara n'echiche oma nke ndi fanti ndi Japan gbara okpukpu ha nwere ma hu ha n'anya. Ọ na-eji ọla edo edo 18K odo na sapphire maka ihe a wee wepụta Aura dara oké ọnụ. Ọzọkwa, onye na-akwado mpịachi anọdụ na mgbanaka n'otu akụkụ nke na-enye ọmarịcha mma. Nhazi ya bụ ịdị n’etiti East na West.
Mbọsị Ụka 31 Ọktoba 2021
Mgbanaka Emere mgbanaka Gabo iji gbaa ndị mmadụ ume ịlaghachi n'akụkụ egwuregwu nke ndụ nke na-efukarị mgbe okenye ruru. Emere onye mere ya ihe ncheta site n’icheta nwa ya nwoke ka o ji ugba anwansi ya egwu. Onye ọrụ nwere ike igwu mgbanaka site na ịgbagharị modulu abụọ nwere onwe ha. Site n'ime nke a, gemstone agba edobere ma ọ bụ ọnọdụ nke modulu nwere ike dakọtara ma ọ bụ ekwekọghị. Na-agbanyeghị akụkụ egwuregwu, onye ọrụ ahụ nwere nhọrọ nke itinye mgbanaka dị iche kwa ụbọchị.
1x3 Tebụl Kọfị Mọnde 29 Novemba
Decor Ntinye Ntinye Mbọsị Ụka 28 Novemba
Only Right Here Onye Ji Mma Satọdee 27 Novemba
Akpa Aka Nchịkọta Womenswear Oge Eji Eme Ihe Nchịkọta Womenswear Mgbanaka Mgbanaka